Aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ mere ka a mara nke ahụ n'Awka oge ọ natara mpụtara banyere nchọpụta ndị kọmitii nnyocha mere banyere ọkụ ọgbụgba ahụ dapụtara n'ahịa Nkwọ Ogbe n'Ihiala, na mkpebi ndị otu ahụ.
Ka ọ na-agụpụta mpụtàrà nnyocha ha mere, onyeisi otu nnyocha ahụ ma bụrụkwa eze ọdịnala Ukwulu, bụ Igwe Peter Ụyanwa kwuru na ha mere nnyocha doro anya ma kpọtụrụkwa ọtụtụ ndị dị iche iche ọkụ ọgbụgba ahụ metụtara, tupuu ha wepụta mpụtàrà ahụ na mkpesa ha. O toro ndị otu ahụ maka ezigbo mkpesa ahụ ha wetara, ma kwe nkwa na a ga-elebà anya ma mezupụtakwa ihe ndị ahụ n'ụzọ a tụrụ anya. Gọvanọ kwukwara na n'ihi nke a, na ihe a gaghịkwa erezị ihe ọbụla bụ mmanụ ọkụ n'ime ahịa ma ọ bụ rụnye ọdụ mmanụ ụgbọala n'ime ahịa ma ọ bụ na nso ebe ndị mmadụ bi.
O tokwara ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ na steeti ahụ n'ihi ịgba mbọ ha niile n'ebe dị iche iche ọkụ ọgbụgba dapụtara na steeti ahụ, ma sị na gọọmenti ga-enyekwu ha nkwado zuru oke iji wee rụọ ọrụ chere ha n'ihu.